ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် အကောက်ခွန်ကင်းလွတ် ပစ္စည်းများ
မောင်လူအေး ရန်ကုန် ပြန်စဉ်က လေဆိပ် အဆောက်အဦး အတွင်းမှာ ရေးသား ကြော်ငြာထားတဲ့ အကောက်ခွန် ကင်းလွတ် ပစ္စည်းများ ကြေငြာချက်ကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူ ခဲ့တာပါ။ ရန်ကုန် တစ်ခါ ပြန်မယ်လုပ်ရင် ဘယ်ဟာက အကောက်ခွန် လွတ်သလား၊ အကောက်ခွန် မလွတ်သလား၊ တစ်ယောက်က ပြောတော့ ဘယ်ပစ္စည်းက အကောက်ခွန် လွတ်တယ်၊ တစ်ယောက်က ပြောတော့ အကောက်ခွန် မလွတ်ပြန်ဘူး။ မသေချာ မရေရာမှုတွေ အတွက် မှီငြမ်းနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်ဗျား။
(အကောက်ခွန် ပေးဆောင်ရန်မလို၊ ပါမစ်မလိုသည့်)
ခွင့်ပြုထားသော ခရီးသည် တစ်ဦးကိုယ်သုံး၊ ၀န်စည်ပစ္စည်းများ
(၁) ခရီးဆောင် အပျော်တမ်းရိုက် ကင်မရာတစ်လုံး၊ ၄င်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ခရီးဆောင် အပိုပစ္စည်းတစ်စုံ (Professional ပစ္စည်းများမပါ)
(၂) (၁၅)ချောင်းထက်မပိုသော ဂေါက်သီးရိုက်တံ တစ်စုံ၊ တင်းနစ် (သို့)ကြက်တောင်ရိုက်တံ (၂)ချောင်း၊ ငါးမျှားတံ တစ်ချောင်းနှင့် ရစ်ဘီး၊ ကြိုး၊ ငါးစာအတု စသည့် ငါးမျှားကိရိယာ တစ်စုံ။
(၄) ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ လမ်းခရီးတွင် ခရီးသည် အမှန်တကယ် သုံးစွဲရန် လိုအပ်သည့်တားမြစ် ကန့်သတ်ချက်မရှိသော ကိုယ်သုံးဆေးဝါးများ
(၅) နှစ်လီတာထက် မပိုသော အရက်ယမကာမျိုးစုံ
(၆) (၁၅၀) ml ထက်မပိုသော ရေမွှေး
(၇) လိပ်ရေ (၄၀၀) ထက် မပိုသော စီးကရက်၊ လိပ်ရေ (၅၀) ထက်မပိုသော ဆေးပြင်းလိပ်၊ (၂၅၀) gm ထက်မပိုသော ဆေးတံသောက်ဆေး
(၈) မြန်မာနိုင်ငံသားခရီးသည်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားချိန်တွင် ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ယူဆောင်သွားသော လက်ဝတ်ရတနာများ
(၉) ခရီးသည် လမ်းခရီး အသုံးပြုရန်ဖြစ်သော ခရီးဆောင် Portable Audio Player တစ်ခု
(၁၀) အမှတ်တရ ရိုက်ကူးရေးအတွက် ခရီးဆောင် Video Camera, HD Cam, DV Cam စသည့် ကိရိယာ တစ်ခုနှင့် အရံ ဓာတ်ခဲ တစ်စုံ
(၁၁) ခရီးဆောင် ကွန်ပျုတာ တစ်ခု၊ ယင်းနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းတစ်စုံ
(၁၂) တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၀၀ ထက်မပိုသော ခရီးသည် အသုံးပြုရန် လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ
(၁၃) ရုပ်သံမသွင်းရသေးသော CD ပြားအကြီး (၆) ချပ်၊ အသေး (၁၂) ချပ်၊ MD (Mini Disc) (၆)ချပ်၊ ဗီဒီယိုတိတ်ခွေ အလွတ် (၆)ခွေ၊ အသံမသွင်းရသေးသော ကက်ဆက်ခွေ (၆)ခွေ၊ (DV Cam, HD Cam) များအတွက် အခွေလွတ် (၆) ခွေ၊ Portable Data Storage Thumb Drive (၂)ခု
(၁၄) အထက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများမှ အပ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊ ပြဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြိစွန်းခြင်း မရှိသော ခရီးသည် တစ်ဦး၏ ကိုယ်သုံးအတွက် ယူဆောင်လာသော ပစ္စည်းတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၀၀) ထက်မပိုသော ပစ္စည်းများကို ခရီးသည် ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်ဟု ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် (သို့) ၄င်းမှ အာဏာ လွှဲအပ်ထားသော အကောက်ခွန် အရာရှိမှ ယုံကြည်လက်ခံလျှင် အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသော ၀န်စည်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(၁၅) နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများနှင့် ဆက်စပ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အခြား လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံခြားသားများ ယူဆောင်လာသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတော်မှ ပြန်လည် ထွက်ခွာချိန်တွင် ပြန်လည်ယူဆောင်သွားပါမည်ဟု ကတိဝန်ခံချက်ပြုပါက စတင်ရောက်ရှိချိန်မှ တစ်နှစ်တာကာလအထိ အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် ခရီးသည် ၀န်စည်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ တစ်နှစ်ကျော်လွန်သွားပါက အခွန်ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
(က) VCR (သို့) DVD Player တစ်လုံး
(ခ) TV တစ်လုံး
(ဂ) ခရီးဆောင် radio တစ်လုံး (သို့) ကက်ဆက်တစ်လုံး (Home Theater မပါ)
(ဃ) Laptop (သို့) Notebook တစ်ခု
(င) လုပ်ငန်းသုံး Tools & Equipments များ
(၁၆) နိုင်ငံခြားတွင် သေဆုံးသွားသော ခရီးသည်တစ်ဦး၏ ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ ပြန်လည် တင်သွင်း လာပါက အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် ခရီးသည်ဝန်စည် အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(မှတ်ချက်။ ။ အမှတ်စဉ် (၁)မှ (၁၄) အထိ ဖော်ပြထားသော ပစ္စည်းများ၏ စုစုပေါင်းတန်ဘိုးသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ(၅၀၀) ထက်မပိုစေရ။)
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် - ၂/၂၀၀၇
Filed Under : Reference, Travel, Yangon
မောင်လူအေး စာမရေးဖြစ်ဘဲ ရှိနေစဉ်မှာပဲ လာရောက်လည်ပတ် ဖတ်ရှုကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ရှိနေဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် မောင်လူအေး အနေနဲ့ လာလည်သူများကို ကျေးဇူးဥပကာရ တင်ရှိပါတယ်ဗျာ။ အယင်တစ်ခါ ဘိုလိုပြောကြရအောင် ပို့စ်တုံးကလည်း သူငယ်ချင်းတွေ သဘောကျ နှစ်ခြိုက်ကြတာ တွေ့ရတာမို့ ခုတစ်ဖန် အလားတူ စာအုပ်နဲ့ လေ့လာနားဆင်စရာ Mp3 လေးတွေ ထပ်မံ ရှာဖွေ ထားခြင်းပါ။ Download လုပ် ဖတ်ဖို့ အဆင်မပြေဘူး ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက်လည်း Embedded Book ပုံစံနဲ့ ဖတ်လို့ရအောင် တင်ထားပေးပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများ အတွက် အကျိုးရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။
Section 01 Section 02 Section 03
Section 04 Section 05 Section 06
Section 07 Section 08 Section 09
Filed Under : Language
အမျိုးနဲ့ရပ်ကွက်ကို ပတ်သာကြွား ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲ ဖောရင်းသွားပြီ ဖလိုက်အသစ်ကြီးနဲ့ဗျ
တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာ မိုးတိမ်ထဲ ပြတင်းပေါက်ကချောင်း သိကြားမင်းတွေ့ရင် နှုတ်ဆက်မလားပဲ
ခင်ဗျားတို့သုံးတတ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တယ်
ဘကုန်းလား ယပလက်လား ဖဦးထုတ် ဂငယ်လား ဒါမှမဟုတ် အ ပဲလား၊ မပဲလား
(မနက်ဆိုမြည်မယ်)၂ Alarm နာရီ ရည်းစားမှ ဖြောင့်အောင်မလွမ်းနိုင်မီ
အရောင်စုံလူတွေကြားထဲ တိုးရဦးမယ် အလုပ်နောက်မကျမီ
အဝေးကဦးချကြ ရွှေတိဂုံမြေ ပြန်မရောက်သေးသရွေ့တော့
ဘာဖြစ်ဖြစ် သတိသာထား ငါတို့ရည်းစား သူများနဲ့ညား
မဟာလူတန်းစား အိပ်မက်များ၊ အိမ်ပြန်အခန်းပိတ် ကျိတ်ငိုကြ
အရုဏ်တက်တိုင်းထ မနက်တိုင်း တက်ကြွ လူလည် အာရှသား
မောင်လူအေး ရန်ကုန်က ပြန်ရောက်ပြီး ဘလော့လည်း မရေးဖြစ်၊ ပို့စ်လည်း မတင်ဖြစ်နဲ့ အလုပ်ရှုပ် (ချင်ယောင်ဆောင်)ရင်း တိုင်ပတ်နေတာ တော်တော်လေး ကြာသွားတယ်။ ရန်ကုန်က ပြန်ရောက်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ရေးစရာလေးတွေ ပါလာတယ်။ စာတွေက ခေါင်းထဲမှာ စီနေတုံးပဲ ရှိသေးတယ်။ ကွန်ပျူတာ ပေါ်ကို စာအနေနဲ့ ရောက်မလာနိုင်သေးဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများကိုလည်း အားနာပါတယ်။ ဆိုတော့ လောလောဆယ် မောင်လူအေး လုပ်နေတဲ့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Project Management ဆိုင်ရာ စာအုပ်လေး တစ်အုပ် မျှဝေပါမယ်။ Project Management နဲ့ ဆက်စပ် အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် အထောက်အကူ ပြုမယ် ယူဆပါတယ်။ ခေါင်းထဲက စာတွေကတော့ တဖြေးဖြေးချင်း ကွန်ပျူတာပေါ်ရောက်အောင် ရေးသွားပါဦးမယ်။
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် အကောက်ခွန်ကင်းလွတ် ...
Myanmar : Super Cheap Calls Using Smart Apps
In these days, there are rumors saying that mobile SIM card will be released with 5000 kyats (USD 6.00/pc) on 1st of April. Last month,...
Sky Net ဘယ်လဲ ဘာလဲ! - ရွှေသံလွင်ကျော်ဝင်းဆိုတာ စစ်အစိုးရအကြောင်းကို အပါးနပ်ဆုံး ခရိုနီလို့ပြောလို့ရတယ်.. ဦးတေဇ ဦးဇော်ဇော်တို့ ခေတ်မရောက်ခင် ဦးဌေးမြင့်၊ ဦးအောင်ကိုဝင်း၊ ဦးခင်ရွှေခေ...
ကြက်ကြွပ်ကြော် – Crispy Fried Chicken - ကြက်ကြော်ဆိုတော့က ဆီရှိရင်ကြက်ရှိရင် ကြော်လို့ရတယ်လို့ပဲ အကြမ်းဖျဉ်း ပြောကြမပေါ့နော့။ ခုပြောချင်တဲ့ ကြက်ကြော်ကတော့ Crispy Fried Chicken လို့ခေါ်တဲ့ ကြက်ကြ...
မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဖိုက်တင်ကို မပြဘူးဆိုတဲ့ ရဲမင်းပိုင် - “ ကျွန်တော်က အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်တယ် ၊ ဖိုက်တင်ဆိုတာ က သက်လုံကောင်းဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်။ လူကြမ်း ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် (၁၀)ယောက်ရှိရင် ကျွန်တော်က...